Inter Milan oo tallaabo kale u qaadi doonta Romelu Lukaku & qorshaha ay damacsan tahay iney ku qanciso Man United oo la ogaaday. – Gool FM
(Milan) 16 Luulyo 2019. Inter Milan ayaa lagu soo warramayaa iney diyaarineyso qorshe ay dalab cusub ugu direyso dhigeeda Man United, waxeyna kaliya dooneysaa saxiixa xiddig reer Belgium Romelu Lukaku si uu badal ugu noqdo Mauro Icardi.
Nerazzurri waxey damacsan tahay iney miiska saarto 60 Malyan oo Pound oo la raacinayo gunno aan la shaacin si ay u hesho xiddigii hore Everton.
Sky Sport iyo ESPN ayaa isku raacay in Inter Milan ay saddex jeer oo kala duwan kala bixin doonto lacagta xiddigaan ay ku iibsaneyso, sidoo kalana Red Devils qudheeda waxey fahamsan tahay iney heysato waqti ay suuqa kaga hesho badalkiisa.
Kooxaha horyaalka Premier League wuxuu suuqa ka xirmayaa 9-ka August, halka kooxaha kale ee yurub uu ka xirmi doono dhamaadka bisha soo aadan.
Lukaku mar walba waa dooqa koowaad ee Inter Milan, inkastoo ay wadahadaladii hore istaageen hadana mar walba waxey isku dayi doonaan iney lasoo saxiixdaan.